Along Comes Hamas By Andrew C. McCarthy
ငြိမ်းချမ်းစွာနဲပ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ဆိုတာကိုတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် လက်ခံပါတယ်
ကျုပ်တိုင်းပြည် အတွက် ငိုရတယ် (ကဗျာ)
အထားအသိုပျက်တဲ့ ဘဝတွေနဲ့ အမေ့ တိတ်ဆိတ်မှု ကောက်ကြောင်း (ကဗျာ/ Blog ကဏ္ဍ)
Thein Moe Win Speech at Canberra Australia (08-Nov-2012)
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရှင်းလင်း ပြောကြားချက်အား ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း
In case anyone is curious enough, this is my favourite Hokkien Mee hawker stall on the island. It is located right opposite the first entrance into the Kuantan Road Market. I've known of its existence for more than 50 years but had never attempted to try it until several months ago. The big irony is, I've known of this family business ever since I was small. You see, our families were once neighbours in Seang Tek Road until we were forced out byanew landlord who wanted to use our homes for other purposes.
The chap's name is Ah Leng. He is about my age, perhapsabit younger. Obviously, when we were small, the Hokkien Mee stall was run by his father named Tua Bak,aloud but jovial character who, in the afternoons, would pull upachair and sit fanning himself on the five-foot way of the house with his singlet rolled all the way up till his armpits.
My family stayed in the corner lot ofarow of four townhouses. Beside the house was an alley way which ran the whole length of the house before it turned sharply left to join another alley off Perlis Road at the back of our home. I do not know about its reputation now but long ago in the 1960s and 1970s, this was one heck ofanotorious place that rivalled Irving Road. They were the hotbeds for prostitution and other questionable activities after dark. My father used to rideaHonda motorcycle at that time. Sometimes whenacar parked itself at the front of the house, it would be impossible for his motorcycle to come into the house from the front and he would have to come in through the back door. It was my job to open the metal backdoor for him to push the bike in or out. From about eight o'clock onwards, I would always see shadowy characters congregate in the corners. Sometimes when things got heated upabit, someone would accidentally crash or fall onto the backdoor and startle everyone, especially my grandmother. But they were harmless to us and we just left them to their activities. Come to think of it, there was little that we could do too. The authorities knew of the goings-on but their raids were few and far in between. In the mornings though, the deserted back alleys would reclaim their innocence and sometimes I'd see joss stick makers spread out their joss sticks like flowers to bake in the sun.
To the left of my home was an Indian apom stall. The skinny hawker, dressed in his dhoti, was quiteacolourful character, very dark skinned and toothless. He used to live inahouse somewhere across the main Dato Kramat Road. Mighty good business, if I remember correctly but by noon, he would have already washed the whole stall and floor clean. Tambi, he always called me, and I would always refer to him as the aneh-neh man. His apom was basically white, made fromabatter of flour, milk and coconut water, which gave itaslight sourish taste. For all I know, it could have contained some tuak too. But my aneh-neh man would always entertain special orders. Like, for example, he wouldn't mind mixing an egg into some of his flour mixture before cooking for us. His other variant was just to break openasmall hole in the egg shell, pushachopstick in and break up the yolk and albumin, and then shake the egg contents onto the apom as it cooked in the earthen ware. I don't get to see much of the traditional clay pots nowadays as modern apom sellers have moved on to metal mini-woks.
So my home was actually one of four townhouse units in Seang Tek Road. We stayed inacorner unit and right next to us was Ah Leng's family. On his right was an old and dark sundry shop which I always found interesting. At the slightest excuse, I would go there to buy stuff that my mother or grandmother would want. The proprietress wasanice elderly lady, quite plump. We always called her Chai Tiam Mah Ah Chim. She wasafirst-generation Chinese immigrant and the most fascinating thing about her was her bound feet. Asaresult, she always hadagreat deal of difficulty walking. She had several grandsons and one of them, Bee Loo, was my age. We both went to the same Westlands Primary School. I think that it was in 1966 that he died suddenly of an unknown cause. We never attempted to find out the details. We just accepted that one day, he was gone.
The fourth house in our row of townhouses was rented out toabakery. We knew very little of the business there except that once inawhile, I would be asked to go there and buy one of their small butter cakes. I clearly remember thatacut cherry would be stuck on top of the cake. It was alwaysatreat to take the cake home and then dig the cherry out while nobody noticed. But of course, my mother always knew where it had went. Into my stomach.
Beyond the row of our four townhouses wasalonger stretch of other residential townhouses. We had even less interaction with them except to know thataretired nurse lived in one of them and her son eventually ended up asateacher in the Penang Free School. At the farthest end of this row of houses stayedatrishaw man. Somehow, my grandmother knew him as Sek Lim and come every April, she would book him to peddle us to the Batu Gantong cemetery for Cheng Beng. I remember leaving the house in the trishaw at about six o'clock in the morning. All around us it was still dark, but by the time we reached York Road or Batu Gantong Road, daylight had broken and we could see the roads were covered by an impressive layer of yellow flowers from the Angsana trees. Foralong while, Uncle Sek Lim ferried my grandmother to other places too. For instance, every time she was sick, we would arrange for him to take her to the International Clinic at MacAlister Road. Peter Tan Ewe Aik was the doctor there. I do know that he was somehow related to my grandmother's side of the family. When we were forced to move out from Seang Tek Road in 1980, I was told that he came by to claim some of the nonnya antiques in the house.
So what else do I recollect of my old Seang Tek Road neighbourhood? Well, there wasasmall temple across the street from my home. Once or twice every year, the temple's deities would have some sort of celebration and there would beapuppet show over three days. Because the sundry shop was almost directly in front of the temple, the puppet stage would be set up on the five-foot way. You can imagine the din and noise over the three days, especially at night until about midnight. This was one aspect of my childhood days that I found most uncomfortable. Occasionally, I would be so fascinated with the hand puppets that I'd go watch the puppet shows briefly but I never got to understand what went on onstage or offstage.
So this is it:arough recollection of my childhood days in the old neighbourhood around Seang Tek Road. Had been meaning to write about it foravery long time but was unable to find the inspiration.
Tidak ada ruang di dalam artikel ini untuk memberikan ulasan secara 'detail' terhadap ucapan yang mantap TGHA ini tetapi cukup bagi saya memberikan gambaran yang ucapan telah menyentuh bidang ekonomi sebagai sebuah negara berkebajikan yang menjadi tuntutan agama itu. TGHA juga telah menyentuh tentang isu sosial yang mendesak untuk di selesaikan serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita.
PAS yang di fahamkan akan bertanding di 70 kawasan parlimen akan memenangi jauh lebih banyak kerusi dari yang mereka dapati semasa PRU 2008 dahulu. PAS tidak syak lagi akan menjadi parti yang dominan dalam pentadbiran baru nanti dan saya secara peribadi tertunggu-tunggu 'ambience' politik yang baru itu.
PR akan membuktikan yang mereka lebih baik dari pentadbiran BN. Seperti biasa dalam politik penilaiannya adalah secara relatif. Tetapi PR pasti merupakan 'coalition' yang lebih baik dari BN.
Seperti yang saya sebutkan selalu, 'the worst of Pakatan Rakyat isalot better than the best of Barisan Nasional'.
Yang 'perfect' hanya ada kepada Maha Pencipta, Allah SWT sahaja.
Roman Emperor Marcus Aurelius in the year 180 AD. Gaius Julius Sohaemus, also known as Sohaemus of Armenia and Sohaemo (Greek: Γάϊος Ἰούλιος Σόαιμος, Sohaemus is Arabic for little dagger, flourished 2nd century) was an Emesene Aristocrat from Syria who served asaRoman Client King of Armenia. A3hour movie.
(Levant) This pass week has seen old hatreds openly surface and reignite the physical fisticuffs which passes as civilized dialogue while they profess to all and sundry that they are peaceful.
So inanutshell, in an attempt to sendapositive message to the Emir of Qatar the other month, Hamas launcheda100 rocket salute into Israel. As this failed to get the Israelis to attack on mass and turn the spotlight away from Syria. So last week they fired an anti-tank missile at an Israeli jeep after their attempt to lure the IDF into Gaza and detonateahuge tunnel filled with explosives failed. In response the IDF took out the leader of Hamas's terrorist arm and apparently that struckacord with little terrorists and angry that their chief bomb maker went boom, they have launched over 800 rockets into Israel and in return Israel has struck back with around 300 air-strikes killing as of today 20 people.
For some strange reason the liberals are angry at how Israel is bombing the shit out of Gaza.. .Hello! Yes in their eagerness to pledge their solidarity, the liberals totally omit the 800 rockets, the anti-tank missiles. Not to miss out on this hate fest the leaders of Turkey have joined in:
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan stepped up condemnation of Israel on Friday, calling its ongoing strikes on Gaza "atrocious" and accusing Israel of pounding the Palestinian territory for "fabricated reasons.
President Abdullah Gül has decried an ongoing Israeli assault on Gaza that has left more than 20 Palestinians dead so far, most of them civilians, describing the move asa"bloody investment in election."
But here's something the burgers of Turkey seem to have left out during their condemnation of Israel. The other month shells from Syria hitatown in Turkey and for six days Turkey bombed and shelled Syria in which to teach the Syriansalesson. The Turks moved troops to the border and informed the Syrians if they didn't desist, they would feel their wrath. Also as Turkey is an Islamic nation they played the victim card to the world which is why NATO is deploying two patriot missile batteries to the border in which to protect Turkey from Syria.
So let me get this right, Syria launches6mortar shells into Turkey and Turkey not only has the right to bombard Syria into the stone age.deploy troops to the area and demand protection from NATO.
But when 800 missile's are launched inaweek from Gaza into Israel and Israel retaliates it is not only wrong, butagenocide in the making (20 dead)
The irony here is while the liberals and Muslims vent their spleens over Gaza. Yesterday in Syria 106 people were killed and nobody in the Muslim or liberal world batted an eyelid. There people lies the rank hypocrisy that prevails for decency in the world today. Hat tip: Eye On The World
Posted: 17 Nov 2012 07:26 AM PST
The day of reckoning is here. For over 30 years, the United States government and the institutions that drive public opinion have made like Susan Rice when it comes to the ideological threat that Islamic supremacists pose to freedom, fabricating reasons to remain in denial. Thus inured, the American people have elected, and now reelected,apresident notoriously fond of America-bashing Islamists. The attraction would not be hard to understand if we were not so ideology-averse — GOP strategists having made Obama's radicalismasubject nearly as off-limits as Islamic supremacism, helpfully leaving the Left to fill the canvas with their portrait of Mitt Romney: "Where Gordon Gekko Meets Michael Vick."
The president isamovement leftist who sees in our societyacondemnable legacy of racism, imperialism, and economic exploitation that cries out for "fundamental change." That is not meaningfully different from the Islamist perspective of America: The Brotherhood's self-proclaimed mandate to "eliminate and destroy Western civilization from within" by "sabotage" is, in effect,acognate summons to "fundamental change," even allowing that Islamists are driven to statism by sharia rather than Marxism. The Brotherhood's American mouthpiece, the Council on American-Islamic Relations, brags that the president nabbed 85 percent of the Muslim vote on November6— larger even than Obama's lopsided share of the Hispanic vote, which has GOP strategists hyperventilating. You wouldn't want to take CAIR claims at face value, but their ardor for Obama, like the Brotherhood's, is palpable. And as we've seen for four years, it is not an unrequited love.
So along comes Hamas. Just days before the presidential election, the terrorist organization — begotten by the Brotherhood and serving as its Palestinian branch — spearheaded an Islamist offensive, firing in justafew days over 120 rockets into the Jewish state from its home base in Gaza. You may not have heard about it untilafew days after the election. Like Iran's act of war in shooting ataU.S. drone in international waters, it signaledafurther dangerous unraveling of the Middle East that undercut the media narrative of Obama as foreign-policy chess master, so it was tucked under the rug. But it could not be ignored forever, for it is not just another spike in the ever-thrumming Gaza border skirmish. It is the renewal of an unending war — an existential one for Israel, which is expected to fight "proportionately," with both hands tied behind its back, yet blithely accept, as the international community has, the barbaric Islamist claim that nothing short of Israel's destruction will be satisfactory.
By its own declaration, Hamas will be at war with Israel until the latter's demise. Toward that end, the jihad has now been taken to population centers such as Tel Aviv. As of this writing, the Israeli death toll stands at three, kept low only by the crudeness of the jihadist weapons and tactics. By the calculation of terrorism analyst Ryan Mauro, the onslaught begun last week brought the yearly total of missile attacks on Israel to about 700. That is, while the Obama administration has been facilitating the Muslim Brotherhood's rise in Egypt, Tunisia, Libya, and soon Syria — with Obama drawing ever closer to Turkey's Islamist prime minister, Recep Tayyip Erdogan, even as Erdogan champions and funds Hamas — Gaza's jihadists have been emboldened to step up their terror campaign. 12Next >
I am sure that there are silent majority of other faiths ( Majority true Buddhists) who sympathize the plight of Muslims including Rohingyas, because true teaching of Buddhism is all about love and forgiveness, not killing or putting them in sub- human status of living.
The problem is DASSK 's decision to keep quiet for the unfair, unjust depopulation and killing of Rohingyas, Kaman, and Burmese Muslims. Due to her enormous moral influence, we can not blame the rest for keeping quiet. Dalai Lama and Dasmon Tutu, seemed to be wrong, HRW Satellite Photo of Kyauk Phyu, where majority of Kaman Muslims houses were torched with fire is also wrong, Rohingyas were burning their own home and running into the jungle because they loved to live in the Jungle, people from Kyauk Phyu were happy to become modern day boat people overnight. That is not what sane people will believe!
You, Maung Zarni, Kamal Hussein, Aishah Ma and6others like this.
Maung Zarni the Lady is not keeping quiet. She is breaking the silent – and framing the issue, rather ignorantly, as "illegal immigration". she isanationalist in an exclusionary sense. Nothing like her martyred father.
Smar Nyi Nyi It is need to check her at TATAERLAY(small bridge).She can not solve the simple sum of politic. Now, she loses both, only reveals her ignorency.
Nay Aung Kyaw Then what kind of " Social Justice" she has been preaching for since the time of her hibernation cum house arrest ?
Ko Ko Gyi She had already declared that she is NOTamoral leader and notaHuman Rights icon. Other people just regarded her like that. She is alwaysapolitician. My heart breaks to hear that words…it is like she had wrotea"Dear John letter" to me and all the real democrats who value the Human Rights.
May you allow me to share your post in my blog …with all the comments…We R, after all Brothers of same feather….
"Perhimpunan di peringkat negeri juga diadakan.Pada 1 Disember di Johor; Melaka (8 Disember); Pahang (9 Disember); Terengganu (14 Disember); Perak (16 Disember) dan Sabah (24 Disember).
"Manakala negeri-negeri lain belum ditetapkan lagi," kata beliau.
"Saya yakin jika perhimpunan itu disertai sejuta orang, kita akan menawan Putrajaya," katanya lagi.
" ကိုယ့် သာသနာကို အစ္စလာမ်က လာဖျက်လို့လည်း မပျက်ဘူး။ ခရစ်ယျာန်က လာဖျက်လို့လည်း မပျက်ဘူး။ ဒီသာသနာတော်က နံဘေးက ဘယ်သူမှ ဖျက်လို့မရဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖျက်မှ ပျက်မှာ ။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ မတူညီသောမူတွေ ရှိပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစွာနဲပ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ဆိုတာကိုတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် လက်ခံပါတယ်။"
ရဟန်း စာရေးဆရာ အရှင်ဇောတ (ချပ်သင်း)
Posted: 17 Nov 2012 04:19 AM PST
အောက်တိုဘာ၊ ၂၅၊ ၂၀၁၂
မြေပေါ် နဲ့ မြေအောက်၊ သယံဇာတ ကွယ်ပျောက်ယုံမက
သဘာဝပါ ငါးပါးမှောက်တော့မယ်၊ ရောင်းလိုက်ပုံများ
မှောင်လိုက်တဲ့အနာဂတ် နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်
သန်းခေါင်ထက်ညဉ့်နက် နေခဲ့ပြီ၊ အဆင်ခြင်မဲ့ အပြုအမှု
ရမ်းကားတဲ့ အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်၊ ဂေဟနဲ့ သဘာဝ
စူးစမ်းတဲ့ဥာဏ်ရည် ကို ရိုက်ချိုး
အတွေးခေါ် တွေကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့ပြီးမှ
ကျောင်းပြီးခဲ့ ငါတို့ဘ၀တွေ၊ ဦးဏှောက်တွေ ပုံယွင်းနေခဲ့ကြ
ဒါတင်မက၊ မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါ ပုံဖျက်ခံခဲ့ရပြီ
နေရာတကာကြည့်စမ်း…လူငယ်တွေ၊ လူငယ်တွေ ၊ရည်မှန်းချက်မဲ့ လူငယ်တွေ
ဘယ်သူ့ အတွက် အနိုင် ဆိုတာ ငါတို့ အသိပေပဲ
ငါတို့တွေ ခိုကိုးရာမဲ့ကြတော့၊ မျက်ရည်သာ ခမ်းခြောက်သွားကြတယ်
ဖိနှိပ်ခံလမ်းက လွတ်မြောက်ဖို့၊ အတွေးတွေတောင်
မရဲရင့်ကြတော့ပြီ ၊ ဒါလားကွဲ့ ဒီမိုကရေစီ
ရှင်သန်ရေး မျှော်လင့်ချက်၊ ငွေမရှိရင်ကျိုးပျက်ကြရပေါ့
ချိနှဲ့တဲ့၊ စံနစ်အောက်မှာ၊ အသက်တွေက မြက်ခြောက်တွေအလား
ကုသမှု၊ မခံယူဘူးကြ ပြီ ဆိုလေရဲ့
ဖိနှိပ်မှုတရားအောက် အတွေးအခေါ်တွေလဲ သဂြို င်္လ် ခံခဲ့ရဖူးပြီ
မှိုင်းတိုက်တဲ့ ၀ါဒအောက်၊ ဦးဏှောက်ထဲ ကျပ်ခိုးပြည့် ပျက်သုဉ်းလုခဲ့ပြီ
ခက်ခဲတဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအောက်၊ ဘ၀ပေါင်းများစွာ မြေမြုပ်ခံခဲ့ရပြီးပြီ
ရက်စက်တဲ့ ချုပ်ချယ်မှုများအောက်၊ ပါးစပ်ပေါက်ဟဖို့ကို ငါတို့မေ့တတ်ခဲ့ကြဘူးပြီ
မှိုတက်ဆဲ စရိုက် ဆိုးတွေအောက်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေလဲ ပျောက်ရှခဲ့ကြဘူးပြီ
ကတိလာ၊ ဒီမိုကရေစီတရားမှာ၊ ငါတို့ပျော်ကြဖို့ အံခဲကြဘူးတယ်
အပြောင်းအလဲ ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထဲ၊ စီးမြောလို့ ပျော်ဝင်ယစ်မှုးခဲ့
တန်းတူအခွင့်အရေး ရွှေအိပ်မက်ထဲ၊ အနာဂတ်ကိုနှစ်သိမ့်ဖူးခဲ့တယ်
ပစ္စုပ္ပန်၊ ငါလည်ပြန် ကြည့်မိတော့
အမျိုးသားရေး ၊ အခြောက်အလှန့်မှာ
ကျီးလန့်စာ ငါတို့ စားနေခဲ့ရပြီ
ခြေမြစ်မဲ့၊ မုသာဝါဒီ သတင်းမုန်တိုင်းတွေအဝှေ့မှာ
တို့ အနာဂတ်တွေ၊ လုဝှက် ခံခဲ့ကြရပြီး
အကွက်ဆင် အဓိကရုဏ်း တချို့ကြောင့်
ငါတို့ချင်း ၊ယုံကြည်ချက်တွေ ပျက်သုဉ်းလု ရင်ဆိုင်နေရပြီ
ငါက၊ အရင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
ငါအသက်ပေးချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ ငါ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အဲဒီလက်ညိုးတွေက ငါ့ရင်ကိုဖေါက်လို့ နှလုံးသားကိုဒဏ်ရာပေးကြတယ်
အဲဒီလက်ညိုးတွေမှာ ငါချစ်တဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့ အရိပ်တွေပေကျံနေတယ်
အသုံးချခံရတိုင်း၊ အကွက်ကျကျ ၀င်ကစားပေးကြတဲ့
လမ်းကြောင်းတစ်ချို့က၊ လှည့်ပြန်ပြေးနိုင်ဖို့၊ ငါငိုနေရတယ်
ကြည့်နေနိုင်တဲ့၊ ငါ့မျက်လုံးတွေအတွက်၊ ငါငိုနေရတယ်
ရင်ဘတ်ပွင့်လုမတတ် ၊နာကျည်းစွာ ငါငိုနေရတယ်
ငါချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်….
နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့၊ စားသုံးခံဖြစ်လာရမယ့်လက်ကျန် သယံဇာတတွေအတွက်
နုံနဲဆဲငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အသိတွေအတွက်
အကျွန့်ဆုတောင်း (ကဗျာ/ Blog ကဏ္ဍ)နိုဝင်ဘာ၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂
ရေးသူ ။ စိန်ဌေးဟန်
*ပညာနဲ့ မေတ္တာအပေါ် အခြေခံကာ
အကြင်နာနဲ့ သစ္စာအပေါ် အနေမှန်စွာ
ပြန်မတ်ကာ နှစ်ဆတိုး အောင်မြင်စေတော်မူပါ။
Posted: 17 Nov 2012 02:48 AM PST
"ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ ကာကွယ်မလေ…
ဒါတို့ ပြေ..ဒါတို့ မြေ တို့ ပိုင်တဲ့မြေ" လို့ ဟစ်ကြွေးရင်း….နဲ့ 
"ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင်…ဗိုလ်ချုပ် ဒို့ ဖခင်" ဆိုတဲ့
တီးတိုး ရေရွတ်ရင်း…. အတုယူအားကျခဲ့ဖူးတယ်….
" တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသည် အဓိက"
" အားကြီးသူဆိုတာ အားငယ်သူကို
စာနာသနားရတယ်" ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကြောင့်
"The Lady" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက
"Michelle Yeoh" ကိုတောင် အမေ့ကိုယ်ပွားလေး အဖြစ်..
အော့စလိုမှာ အမေ..နိုဘယ်ဆုယူနေတာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ 
အမေ..ပြောလာမယ့်… ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ရပ်တည်မှု့မျိုးကို
"ပုခက်လွှဲတဲ့ လက်က ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးနိုင်တယ်"တဲ့
ကျနော်တို အနာဂတ်တွေ တောက်ပကောင်းနိုင်ပါရဲ့ လို့ 
အမေ့ရဲ့ ရှေ့ မတိုး …နောက်မဆုတ်..
ကျနော်တို့ ရဲ့ အနာဂတ်တွေ မဲ့ရပေါ့….
ကမ္ဘာ့အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး နိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ 
"ပုခက်လွှဲသောလက်သည်လည်း…လူမျိုးတုံးစေနိုင်သည်" လို့ 
"ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် အမှားကျူးလွန်သူတို့ အတွက်သာရှိသင့်တဲ့
ဝန်ခံခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့ " အမေ ဖြည့်မတွေးမိခဲ့တာ..
ဘာလို့ များ အမေ…နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သလဲလို့ 
ဘာလို့ များ…..အမေ..မလုပ်ခဲ့တာလဲလို့ 
အကြောင်းမဲ့ အာဇာနည်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ကျနော်တို့ လည်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ…
ကျနော်တို့ ရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ 
ပစ္စုပ္ပန်တွေကိုလည်း လစ်လျူရှု ခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတာ…
ကျနော်တို့ ရဲ့ မျိုးနွယ်စုလေးလည်း သွေးမြေကျခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ…
အဲဒီ စက်ဝိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆုံမှတ်တစ်ခုခုမှာ..
အလှည့်ကျ မနွဲ့ စတမ်းပေါ့…ဆိုပြီး
ငိုကြွေးစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူမမည်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ 
ကျွန်တော် ..နိုဘယ်ဆုတစ်ဆု ချီးမြှင့်ချင်သေးတယ်…
တစ်ချို့ နိုင်ငံမှာ အမေ့အကြောင်းကို
ကျေုာင်းသုံး ပြဋ္ဌန်းစာအုပ်မှာ ထည့်ကြတော့မယ်တဲ့
" မျက်နှာပြောင်တိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်" ဆိုတဲ့
၂၁ရာစု အဘိဓမ္မာ တရားသစ်တွေ ပါနိုင်တဲ့နောက်တော့
" ကိုယ့်လူကိုယ့်သား ၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုး" ဆိုတဲ့
အဲဒီဖတ်စာအုပ် ကျွန်တော် မဖတ်တော့ဘူး..အမေ…
ဗိုလ်သိန်းစိန်နဲ့ ဗိုလ်ရွှေမန်းတို့ ရဲ့ 
လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ ပါ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်" ဆိုတာလေးနဲ့ တင်..
ရခိုင်မှာ ရှိတဲ့ ညီနောင်တွေ အတွက်
သွေးရူးသွေးတန်း အသံနက်တွေနဲ့ 
အပြိုပြို အလဲလဲ နိုင့်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်မှုတွေ..ကျနော် မြင်ယောင်မိတယ်…
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဘဝအနာဂတ်တွေ
အမေလည်း ကောက်ရိုးတမျှင် မဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်တော့…
Posted: 17 Nov 2012 01:55 AM PST
书面问题 (1) 绿色技术投资项目 • 政府是否有拟定特定的政策吸引更多国内外的投资者投资在绿色科技的领域？如果没有，这是为何？ • 自2008年开始有多少位在雪州投资在绿色科技的领域？ (2) 地方议会主席和市长的官车 • 政府为地方议会主席和市长添购官车拟定了怎样的指南或批文？ • 到底购买官车的决定是否必须反映在地方议会的财政预算案之中，然后交由市议员通过方能实行？ (3) 民选地方议员 • 政府已经建议实行以选举的方式来遴选地方议员。到底政府是否已经准备推行地方政府议员选举的草案，以及何时推行选举？ • 请附上有关草案副本。 (4) 八打灵再也千百村村民申请地契（5A表格） • 要求政府呈上自2008年开始发出给八打灵再也千百村村民地契（Borang 5A）的名单。 • 请问还有多少为村民尚未获得地契，或者是他们的申请还在处理之中？请呈上名单。 (5)
1. Pembangunan di Kuil Batu Caves • Memandangkan projek pembangunan atas sekeping tanah berdekatan dengan Kuil Sri Mahamariamman Batu Caves yang dimiliki oleh Syarikat Dolomite Industries Sdn Bhd telahpun diluluskan pada tahun 2007 dan projek tersebut dibantah oleh Jawatankuasa Kuil tersebut. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memelihara keceriaan pemandangan destinasi
(1) Pelaburan berkaitan dengan industri berasaskan teknologi hijau • Adakah kerajaan mempunyai dasar-dasar yang direka khusus untuk menarik lebih ramai pelabur untuk melabur dalam instrustri yang berasaskan teknologi hijau dari dalam dan luar negara? Jika tidak. Mengapa? • Berapa ramai pelabur yang telah melabur di Selangor sejak tahun 2008 dalam bidang yang berasaskan teknologi hijau? (2)
Posted: 17 Nov 2012 12:40 AM PST
From the FB wall of Royal Dynasty ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရှင်းလင်း ပြောကြားချက်အား ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ယနေ့
မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်
ကြီး အမှူးပြုသော ဆရာတော် ကြီးများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများနှင့်
တွေ့ဆုံ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေ
စိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် (အရင်က
လုံးဝမပြောဖူးပါ) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြသည် (အပေါ်မှာ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
လို့ သုံးထား)ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် (ထပ်ပြီး ပြောင်းသွား) ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်
အခြေအနေဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (အပေါ်မှာ အခြေအနေများ လို့သုံး)
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက် (ပြောင်းပြန်ပြီ) မှာ
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် သူတော်စင်
ဆရာတော်ဘုရားများ (အရင်က လုံးဝ မသုံးစွဲဘူးသော ဝေါဟာရ)နှင့်တကွ
အစ္စလာမ်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများ
(ဘယ်သူတွေကို ဆိုလိုပါသလဲ)အား ယခုကဲ့သို့ ပင့်ဖိတ်ရခြင်းသည်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များအပေါ် သင်ခန်းစာများ
ရယူပြီး (ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူ့ဆီက ဘာသင်ခန်းစာမျိုးကို ဘယ်လိုယူစေချင်တာလဲ)
နောင်တွင် အလားတူ ဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန် နိုင်ငံတော်
အစိုးရမှ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ကြွရောက်လာကြသော
ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် (ဝေါဟာရသစ်ထင်တယ် ရဟန်းလား လူလား)၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ (သြော်
လူဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ် ပါလား) ထံမှလည်း အကြံဥာဏ်ကောင်းများ ရယူရန်
(လာတဲ့သူတွေကို သမ္မတက သင်ခန်းစာပေးပြီး လာတဲ့သူတွေဆီက သမ္မတ က
အကြံဥာဏ်တောင်းတာပေါ့) ယခုကဲ့သို့ ဖိတ်ကြား တွေ့ဆုံ ရခြင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အတူတကွ နေထိုင်ကြသည့် သူများ
အချင်းချင်း (အဲဒီလိုသာ အမှန်ဆိုရင် ဘာမှ ဖြစ်စရာ မရှိပါ)
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ (အနုတိုက်ခိုက်မှု ရှိတယ်ထင်တယ်)၊ အကြမ်းဖက်
သတ်ဖြတ်မှုများ (အနုသတ်ရှိသလား)နှင့် နေအ်ိမ်များကို အကြမ်းဖက်
မီးရှို့ဖျက်ဆီး (ဝေါဟာရသစ်)မှု ဖြစ်စဉ် (၂) ကြိ်မ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
(တိုက်ခိုက်တာ (2)ကြိမ်၊ သတ်တာ (2)ကြိမ်၊ မီးရှို့တာ (2)ကြိမ် ၊ အကြမ်းဖက်
(6)ကြိမ် လို့ ဆိုလိုတာလား) ထိုပြည်နယ်အတွင်း စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ
ယောင်္ကျား မိန်းမ (၁၆၇ ) ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ယောင်္ကျား မိန်းမ (၂၂၃)ဦး ရှိခဲ့ပြီး
မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရသည့် အိုးအိမ်နှင့် အခြား အဆောက်အဦ (အိုးရယ်၊ အိမ်ရယ်၊
ဘာတွေလဲဗျာ) ပေါင်း (၁၀၁၀၀) လုံး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့အိုးအိမ်များ
မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံရမှုကြောင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၆၉၈၀)၊ လူဦးရေ (၁၁၁၀၀၀)
(10100 လုံး မှာ လူဦးရေ 10100 ဆိုတော့ 1လုံးမှာ 10.9ယောက်နေတာပေါ့၊
10100 လုံးမှ အိမ်ထောင်စု 16980 ဆိုတော့ 1လုံးမှာ အိမ်ထောင်စု
0.5ဖြစ်နေရော)တို့သည် အိုးမဲ့၊ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပြီး (အိုးအိမ်ရှိလို့
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တာ ထားပါတော့၊ အခြား အဆောက်အဦ တွေက အခြား
အဆောက်အဦမဲ့တွေဖြစ်ကုန်တာထင်တယ်) အတိဒုက္ခများစွာ ရောက်ခဲ့ကြရသဖြင့်
နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့်အတူ စေတနာရှင် ပြည်သူများ ကမ္ဘာ့ကုလသဂ္ဂဌာနေ
အဖွဲ့အစည်းများ (ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေအရ ရခိုင်မျိုးချစ်တွေက
ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မလိုဘူး၊ ယူလည်း မယူဘူးဗျ) ၊ နိုင်ငံအချို့နှင့်
အသင်းအဖွဲ့ အချို့ (အမည်မဲ့ နိုင်ငံများနဲ့ အမည်မဲ့ အသင်းအဖွဲ့များ)
တို့မှ အကူအညီများ ရယူပြီး လတ်တလော အဆင်ပြေစေရန် (ရေရည်မှာ သေချင်သေပေါ့၊
လတ်တလောဆိုတာ 6လ ကြာပြီဆိုတော့) အတွက် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားရပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်း (အဓိက အကြောင်းအရင်း
ကိုသိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဒါနဲ့များ ကော်မရှင်တွေ ကော်မသေတွေ
ဖွဲ့နေရသေးဗျာ) မှာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ပွားမှု
တစ်ခုအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး (ဒါလည်းသိတာပဲဗျ) ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှုကို
လက်ခံ လိုက်နာရမည့်အစား ဒေါသအလျောက် အုပ်စုတစ်ခုနှင့်တစ်ခု သတ်ဖြတ်မှုများ
ဖြစ်ပွား ကျူးလွန်(ဝေါဟာရသစ်)ရာမှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့်
အကြမ်းဖက်မှုအသွင်သို့ ကူးပြောင်း (အသွင်ကူးပြောင်းရေး လို့ တဖွဖွပြောနေတာ
အခုမှ အမှန်သိရတယ်)ရောက်ရှိကာ ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုနှင့်
အတိဒုက္ခရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးသည်
နိုင်ငံတော်၏ ဆုံးရှုံးမှုများ (နိုင်ငံတော်က အရင်းအနှီး
ဤကဲ့သို့ ဒေသအတွင်း (အာဆီယံရဲ့လေသံ) အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မီးရှို့မှုများ
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွား လာစေရန် လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ (အမျိုးဘာသာ
သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် သူတော်စင်
ဆရာတော်ဘုရားများ နှင့်တကွ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသော အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများ အား ယခုကဲ့သို့ . . . . ဒီအစမှာ
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဗျ)ပြင်းထန်သူ အချို့မှလည်း နောက်ကွယ်မှ
မမှန်ကန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် (နောက်ကွယ်မှ ဆိုမှတော့ နည်းလမ်းမှန်ဖို့
လိုပါသေးလား) မြှောက်ပင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ပေးမှုများ ရှိခဲ့သည့်အပြင်
(၀န်ခံတယ်ပေါ့) ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်း အချို့နှင့် နိုင်ငံအချို့တို့မှလည်း
မမှန်မကန် လုပ်ကြံသတင်းများ ထုတ်လွှင့်၍ ပြဿနာပိုမို ကြီးထွားလာအောင်
လုပ်ဆောင်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ဒါလောက်သိမှတော့
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်
တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ်၊ မီးရှို့၊ ဖျက်ဆီးမှုများသည် မိမိတို့
အစိုးရသစ်လက်ထက် အဖက်ဖက်မှ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် အရှိန်အဟုန်ကို
များစွာ ထိခိုက်စေပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
(သနားလိုက်တာ)။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မှုများ (ကိုယ့်ဘက်က
အမှန်ဆိုရင် တရားမကြောင်းက တရားစွဲလို့ရပါတယ်)လည်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပြီး
ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့နှင့်လည်း ပြဿနာများကို မိမိတို့
အစိုးရမှ ယနေ့တိုင် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း နေရဆဲ (မဟုတ်ရင်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည်
ဗြိတိသျှတို့ အုပ်စိုးစဉ်ကပင် ရှိခဲ့ပြီး ၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ဗြိတိသျှတို့
ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မဟာမေဒင် (၅၈,၂၅၅) ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လာရောက် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မူလက
လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် ပြီးသည်နှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကြသော်လည်း
နောက်ပိုင်းတွင် မပြန်ကြတော့ဘဲ အတည်တကျ နေထိုင်လာခဲ့ ကြပါတယ်။ အတည်တကျ
နေထိုင်သူများမှ ပေါက်ဖွားလာကြသူများ၊ တစ်ချို့ တရားမဝင်
ဝင်ရောက်လာကြသူများ ရှိခဲ့သဖြင့် ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်တွင် ဤကိစ္စကို
အမျိုးသားရေးတာဝန် တစ်ရပ်အနေဖြင့် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်
တားဆီးခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ဟုတ်ကဲ့။ ယခုအစိုးရကတော့
အမျိုးသမီးရေးတာဝန်လို့ ယူဆထားသလား။ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်
တားဆီးခဲ့သည်များ ဆိုတော့ ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် တော်တော်ညံ့တာပေါ့)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလ ဖြစ်စဉ်များအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၏
မြို့နယ် (၁၇) မြို့နယ်အနက် (၁၁) မြို့နယ်၌ ပဋိပက္ခကြောင့် ပြည်သူများ
ဒုက္ခခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒုက္ခခံစားရသည့် ပြည်သူများတွင် အမျိုးသမီး
(၅၃.၈%)၊ အမျိုးသား (၄၆.၂ %) နှင့် (၁၂) နှစ်အောက် ကလေး (၄၂.၉ %)
ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် (ဘယ်လိုတွက်တာလဲ မသိဘူး) အဓိက ထိခိုက်
ခံစားရသူများမှာ (သေတဲ့သူတွေက အမျိုးသားတွေချည်းပေါ့)
အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများသာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များ အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် လတ်တလော လိုအပ်သည့် လူသားချင်း
စာနာမှု အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
ဇွန်လအထိ တစ်နှစ်စာအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၆၆.၅) သန်းခန့် လိုအပ်မည်ဟု ခန့်မှန်း
တွက်ချက်ပါတယ် (ဘယ်သူကတွက်ခိုင်းလို့လဲ၊ ဘယ်သူကပေးမယ်ပြောလို့လဲ၊
ဒီအရေးဟာ တစ်နှစ်လောက်ကြာဦးမှာလား၊ ကြိုတင်စရံငွေ ယူချင်လို့လား)။ ၂၀၁၂
ခုနှစ်၊ ဇွန်လပဋိပက္ခအတွင်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် ဒုက္ခသည်
(၇၅,၀၀၀)အတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖိုး (ဒုက္ခသည်တွေကို ဘူဖေးကျွေးတာလား)
သက်သက်ပင်လျှင် တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်း (1 လ 1 သန်း၊ အခု
6လကြာပြီဆိုတော့ 6သန်းကုန်ပြီးပြီ၊ နောက် 6လ အတွက် 60.5သန်း
ယင်းလူမှုပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ဒုက္ခသည် (၁၁၁၀၀၀) ခန့်မှာ
အတိဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည် သာမက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့်
ပြည်သူ (၃၂) သိန်း မှာလည်း (ဒုက္ခခံစားရသည့် ပြည်သူများတွင် အမျိုးသမီး
ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် ရှေ့မှာပြောခဲ့တာဆိုတော့ ဒုက္ခခံစားရသူ
အမျိုးသမီး ဦးရေ17216000 ကျော်၊ အမျိုးသား ဦးရေ 1478400၊ 12နှစ်အောက်
ကလေးငယ် 1372800 ဖြစ်ပြီး လုံးဝ ငြိမ်းချမ်းနေသူ (မမွေးသေးသောလူဦးရေ)
3200000-4572800=-1372800 ရှိသေးတာ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ အနောက်တံခါးကြီး
လုံးဝ မကျိုးသေးပါ) စိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိဘဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု
လုပ်ငန်းများအားလုံး ရပ်ဆိုင်းလျက်ရှိသည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်
နေရပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် မရှိခဲ့သော ရခိုင်ကျေးရွာများနှင့်
ဘင်္ဂါလီကျေးရွာ အချို့တွင်လည်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းကြောင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံနှင့် လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား
လူငယ်အချို့နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံ (နှင့် လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်
မပြင်းထန်သော)ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအချို့တို့၏ အပြန်အလှန် အနှောက်အယှက်
ပြုမှုများသည် ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပရဟိတဝန်ထမ်းများ၏ စားနပ်ရိက္ခာ
ပြတ်လပ်သည့် ဒေသများသို့ ရိက္ခာဖြန့်ဝေမှုများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ
(နေ့တိုင်းပို့ပေးတာ သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ) အနှောက်အယှက်ပြု
ဟန့်တားလျက်ရှိသဖြင့် ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးမှာ ပိုမိုကြပ်တည်းသော
အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းသို့သော အခက်အခဲကြားမှပင် ၂၀၁၂
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ (၄) လ ကာလအတွင်း ဆန်အိတ် (၁၀၈၀၀၀)
ခန့်ကို လက်ဝယ်ရောက်ရှိအောင် ဖြန့်ဝေခဲ့ရပါတယ် (ဒုက္ခသည် လူဦးရေ 4572800
ကို ဆန်အိတ်ပေါင်း 108000 ဆိုတော့ ဇူလိုင် မှ အောက်တိုဘာ အထိ4လ အတွင်း
လူတစ်ဦးလျှင် (ဆန်က 1 အိတ်ကို 16 ပြည်ပါတဲ့အိတ်နဲ့တွက်ရင် 108000 အိတ်=
1728000 ပြည်) 0.37 ပြည်ရတယ်။4လလုံး ဘယ်လိုများစားကြသလဲ မသိဘူး။)
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လက်ရှိအနေအထားကို သုံးသပ်ပါက လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့်
လူမှုပဋိပက္ခ များ၏ အကျိုးဆက် အတိဒုက္ခများအပြင် မူလကပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု
ရာခိုင်နှုန်း ( ၄၃.၅ %) ရှိပြီး ဒုတိယအများဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်နေခြင်း (ပထမ
နဲ့ တတိယ ပြည်နယ်တွေ သိချင်ပါတယ်)၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ ရေကြီးမှုနှင့် ဂီရိမုန်တိုင်း
တိုက်ခတ်မှုခံစားရသော မြို့နယ်များမှ ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း (၂၈၉,၀၀၀) ခန့်
ရှိနေခြင်း (2010 မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂီရိမုန်တိုင်းက ဒီနေ့အထိ နေ့တိုင်း
တိုက်နေတာထင်တယ်)၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် အာဟာရချို့တဲ့သူ (
၂၀၀, ၀၀၀) ခန့် (ဘာလို့များ လူ 200000 က အာဟာရချို့တဲ့မှု ဖြစ်ရပါသလဲ)
ရှိနေခြင်းတို့သည် ပကတိစိန်ခေါ်မှုအဖြစ် (သမတ္တကြီးကို စိန်ခေါ်သူ ရေကြီးမှု၊
ဂီရိမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှု နဲ့ အာဟာရ ချို့တဲ့သူများ အား လုံးဝ လုံးဝ
ရှုတ်ချပါတယ်) တည်ရှိနေပါတယ်။ ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူ
(၃၂)သိန်းခန့် အနက် ပြည်သူ ( ၆ )သ်ိန်း (၁၉%)ခန့်မှာ (6080000
ကျော်ခန့်ဖြစ်ရမှာ၊ လူ 80000 ကျော်သေသွားပြီ ထင်တယ်) ဒုက္ခသည်များအဖြစ်
ရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဒုက္ခသည်များ အတွက် အစိုးရနှင့်
ပြည်သူများ ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော
အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးမှ စုပေါင်း၍ ညီညီညာညာ ဝိုင်းဝန်း
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှသာ ဒုက္ခသည် ( ၆ )သိန်းခန့်၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးကို
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေ အမှန်တစ်ရပ်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရမည်
ဖြစ်ပါတယ် (အခုထိ သုံးသပ်နေဆဲဆိုတော့ ဒုက္ခသည်တွေ
၁၉၄၂ခုနှစ်ခန့် မှစတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်
စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှာ စုစုပေါင်း ( ၇ )ကြိမ်
ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်များမှာ ယခင်ဖြစ်စဉ်များထက်
ပိုမို ပြင်းထန်လာပြီး သာမန်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်များမှ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်
များသို့ (သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကတောင် သာမန်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်လို့
သဘာထားရက်နဲ့) ကူးပြောင်းအောင် ကြိုးပမ်း လှုံ့ဆော်မှုများ ပါဝင်လာသည်ကို
တွေ့ရှိရပါတယ် (ဇာတ်ညွန်းရေးတဲ့သူ ပြောင်းသွားလို့ထင်တယ်)။
လူမျိုးစုနှစ်စု အကြားရှိ မူလကပင်တည်ရှိနေသော လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်မှု၊
ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အခြေခံလျက်
လူမှုရေးတံတိုင်း ခြားနားအောင် (ကိုအေးမောင်ကတော့ အစ္စရေးလို
တံတိုင်းခတ်မယ်ပြောတာ။ အခုတောင် မျိုးချစ်ပန်းရံတွေကို အစ္စရေးပို့ပြီး
နမူနာယူခိုင်းထားတယ်လို့ကြားတယ်) ပိုမို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
ပဋိပက္ခများ (အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်လိုက်၊ လူမျိုးရေးဖြစ်လိုက်၊
ယင်းကဲ့သို့ လူမျိုးစုနှစ်ခု၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အခြေခံလျက် ပိုမို
ကွဲပြားခြားနားအောင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အသာစီးရအောင် ကြိုတင်စီမံ
လုပ်ဆောင်နေကြသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များဆီိသို့ ဦးတည်စေလျက် ရှိနေကြောင်း
သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင်
ကွဲပြားခြားနားသည့် လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်မှုနှင့်
ဓလေ့ထုံးစံများကိုပင် နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသော စွမ်းအားအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ
အသုံးချနေသည့် သာဓကများကို သင်ခန်းစာ ရယူရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
(သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် အဲဒီနေ့က ကျောင်းပျက်တယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သာမန်ပြည်သူများ (သာမန်မဟုတ်သော ပြည်သူများကရော
ဘယ်လိုလဲ)အနေဖြင့်မူ နိစ္စဓူဝ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရေး၊ အလုပ်အကိုင်
ရရှိရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ
နေထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်လိုသည့် သဘောဆန္ဒများသာ ရှိနေပြီး ပဋိပက္ခကြောင့်
အတိဒုက္ခ ရောက်နေရသည့် အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်အောင် အစိုးရမှ
ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုသည့် ဆန္ဒများရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
(ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ မလုပ်ဘဲနဲ့ အလိုလို သိသွားတာပေါ့ မယုံနိုင်စရာကြီး)
လူမှုပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၏ အရင်းခံ အကြောင်းတရားများကို သုံးသပ်ရာတွင်
သမိုင်းဖြစ်စဉ်နှင့် လူမျိုးရေးခံစားမှု၊ န်ိုင်ငံရေး အခြေအနေများ သာမက
ပကတိမြေပြင် အခြေအနေနှင့် (ဒါကြောင့် ဂြိုလ်တုက ရိုက်ပြတဲ့ပုံတွေကို
အရင်းခံအကြောင်းတရား ဖြစ်တည်မှုများအနေဖြင့် တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၏ အရင်းခံ အကြောင်း တရားတွင် အောက်ပါ လူမှုစီးပွားရေး
အချက်အလက်များက ပြဿနာ၏ အဓိက ရေသောက်မြစ်များ (ရေမသောက်တဲ့မြစ်တွေကြောင့်
သေဆုံးသူများ၊ ဒုက္ခသည်များ၊ အမျိုးသမီးများ နှင့် ကလေးငယ်များ အတွက်
လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်)အဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်-
(က) လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲ၍ အထီးကျန် သီးခြား တည်ရှိနေခြင်း။
(ခ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်မား၍ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း။
(ဂ) စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။
စင်စစ်အားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တံခါးဝ
(ဂျာနယ်သမားများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအပြီး ရလာဒ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသော
ဝေါဟာရ)ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း
ဒေသနှင့် လည်းကောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် လည်းကောင်း၊
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများ နှင့် လည်းကောင်း
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသာမက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက် ကုန်းတွင်းပိတ်
ပြည်နယ်များ ကပါ ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိပ်ကမ်းထွက်ပေါက်များကိုအသုံးပြုရန်
စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် (အချင်းချင်း စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ သမ္မတကြီးနော်)မိမိတို့က
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဗဟိုချက် ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းနှင့် ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်းတို့သည်
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ် စတင် အသက်ဝင်လာတော့မည်
ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်။ အခု အားလုံးသေကုန်ပါပြီ) အလားတူ သံတွဲလေဆိပ်၊
ကျောက်ဖြူ လေဆိပ်နှင့် စစ်တွေ လေဆိပ်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ်များ
ဖြစ်လာအောင် အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ
ကူမင်းမြို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို
ဖျက်ဆီးလျက်)ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း၊ ရေနံပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းထားပြီး
၎င်းတို့နှင့် အပြိုင် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက
(မြန်မာနိုင်တော်ကြီး ကျဆုံးသွားခြင်းနှင့်အတူ)ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်မှုမှာ ပြည်မနှင့် သာမကအရှေ့အနောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏
စင်္ကြံလမ်းကြောင်း အဖြစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဗဟိုချက် ဖြစ်လာမည်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
စီးဆင်းလာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့် အခြေအနေကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်လျက်
ရှိပါတယ်။ (ကိုအေးမောင်ကို ပြောတာဖြစ်မယ်)
စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်
ပြည်သူများ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားအောင်
ဆောင်ရွက်ပြီးစည်ပင် သာယာဝပြောသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင်
ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုအေးမောင်ကို ပြောတာဖြစ်မယ်)
သို့ရာတွင် ယင်းမျှော်မှန်းချက်များ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ တည်ငြိမ်ရေး၊
အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ (ထို့ကြောင့်
အဆိုပါသော့ချက်အား သော့ခလောက်မှ နှုတ်ယူရမည် သို့မဟုတ် သော့ခလောက်အား
ဖျက်ဆီးရမည်) ယင်းသည်လည်း လူမှုပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းမှသာ
ယနေ့ ကမ္ဘာသည် Globalization ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်
ရွာကြီးတစ်ရွာ သဖွယ် ဖြစ်တည်လျက် ရှိနေပါတယ်။ (နေပြည်တော်ရွာမှ
ရွာသူကြီးရဲ့ အမြင်) ကမ္ဘာ့တစ်နေရာတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်စဉ် မှန်သမျှကို
မိနစ်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းအတွင်း၌ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ အလျင်အမြန် ပြန့်နှံ့
စေလျက် ရှိပါတယ်။ မည်သည့် ဖြစ်စဉ်ကိုမျှ ဖုံးကွယ်ထားရန်
မဖြစ်နိုင်တော့သည်ကို သတိပြုဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီတစ်ခုပဲ မှန်တာတွေ့လို့
ဖတ်ရကျိုး နပ်တာ။ ဒါတောင် အမျိုးမျိုး ဖုံးကွယ်ဘို့ အကြိမ်ကြိမ်
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဝင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် (အခုမှ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရတယ်)ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ထိတွေ့
ဆက်ဆံနေရသည့် အားလျော်စွာ လူသားများနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စ အရပ်ရပ်တွင်
ဖြေရှင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ရှိနေပါတယ်။ (သမ္မတကြီးကို လုံးဝ
လူ့အခွင့်အရေးစံချိန် စံညွှန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ပါက ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်
မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
(သမ္မတကြီးကို လုံးဝ ထောက်ခံတယ်။ ဒီလို နောင်တမျိုး ကြိုပြီးရသင့်တာ။
မျက်နှာလည်း တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေလို ကပ်ခွာတို့ ကပ်ချိန်းတို့
လုပ်လို့ရပါတယ်) ရခိုင်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအနေဖြင့်
ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးစု၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုရမည်
(မြောက်ပေးတာ) ဖြစ်သော်လည်း မိမိအကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုသာကွက်၍
ရှုမြင်ခြင်းမပြုဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်တရားဖြင့် ရှုမြင်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင်
နိုင်ငံများအပါအဝင် လူသားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်
ရှုမြင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဓမ္မကထိက ဦးသိန်းစိန်ပေါ့)
သို့ဖြစ်ပါ၍ လူမျိုးစုနှစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ် အပြန်အလှန်
နားလည်ရေး၊ သီးခြားတည်ရှိသော ရပိုင်ခွင့်များ (ဒီစကားကိုက
ခွဲခြားတာ)ကိုလေးစားမှု၊ ပဋိပက္ခ အသွင်မဆောင်ရေးနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော
လူမှုအသိုက်အဝန်း ဖြစ်ထွန်းရေးတို့အတွက် အစိုးရနှင့်အတူ ရဟန်းရှင်လူ
တစ်ရပ်လုံးက လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ တန်းတူရည်တူ ဝိုင်းဝန်း
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပြည်နယ်သူ
ပြည်နယ်သားများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ
(လက်ခုတ်တီးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်သာကဆင်းလာတာဆိုတော့
မည်သူမဆို မူရင်းမပျက် ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်ပါသည်။ ရင်တွင်းဖြစ် စစ်စစ်မို့ပါ။
Posted: 17 Nov 2012 01:46 AM PST